CCWarsame “Wiilkaan garaadada loo xiray waa kii igu soo weeraray xaruntayda igana dilay 5ruux”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaCCWarsame “Wiilkaan garaadada loo xiray waa kii igu soo weeraray xaruntayda igana dilay 5ruux”.
July 17, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 2
Siyaasiga ugu wayn mucaaradka Somalia ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal kusoo qoray Bartiisa Facebook ayaa dhaliilay munaasabadii xalay lagu dalacsiiyay saraakiil katirsan Ciidanka Boliska kuwaas oo uu sheegay in uu kujiro shaqsigii weeraray Xarunta Xisbiga Wadajir isla markaana dilay shan kamid ah Ilaaladiisa.
Siyaasiygaan oo ah Gudoomiyaha Xisbiga Wadajir ayaa qoraalkiisa ku yiri:-
“Waxay ummada Soomaaliyeed wada ogsoon tahay in wiilkan garaadaha sareeya guuto caawa loo xiray uu xasuuq ka gaystay xarunta Xisbiga Wadajir oo uu 5 askari oo ciidanka xooga dalka ka tirsan ku dilay, maydkoodiina kabaha ku aasay” ayuu yiri Siyaasi Warsame.
Isagoo sii wata qoraalkiisa ayuu yiri “Tani waxay cadayn u tahay in kuwa abaalmarinta siinaya iyo kuwa kor ka soo amray ay danbiga shirko kula yihiin, waxayna shacabka Soomaaliyeed tusaysaa sida uu rajiimka Vila Somalia ka taliyaa sharci, dawladnimo, damiir iyo dadnimo kaga arradan yahay”.
Ugu dambeyn waxa uu sheegay inuu rajeynayo maalin uun in ay cadaalad heli doonaan askartii lagu xasuuqay xaruntiisa “Waxaan kalsooni ku qabaa in wiilashii la xasuuqay mar ay noqotoba ay cadaalad heli doonaan, sawirkaninna uu marqaati fur u noqon doono gaboodfalka xasuuqii uu rajiimka Vila Somalia ka arrimiya geystay”.
Degdeg:- Dagaal hadda socda iyo dad xalay lagu laayay duleedka Muqdisho + Barakac baahsan oo jira.
Cabdiraxmaanow adigaa istaahilo in aduunka lagu dhaafiyo Soomaaliya dhib aan ahayn kala qaybin iyo isku dirid iyo qabyaalad maahee wax kale aan kashaqayneynin. Adigu ma ahayn inaad xoriyad ku socoto iska daa aad hadasho ama aad xisbi madax u noqoto. Adigu waxay ahayd inaad Madax u noqoto Maxaabiista kuwa qoryaha raashinka u soo gura
Beelaha C.C.Warsame baa lagu yaqaan in ay weeraraan reero meel dagan oo ay bilaash ku laayaan oo ay haddana bililiqaystaan maalkii mawtiday layeen.Imisa kun oo qof oo soomaali ahaa bay beeshiisu nafta ka qaaday oo aynaan maqal isagoo ka hadlaya dhibaatooyinka ay beeshiisa hoose u geysatay soomaaliweeyn?C.Cabdishakuur waa ninkii muranka galiyey dhulka iyo badda soomaaliya.